बेहुलाका कारण विवाह मण्डपमै यस्तो का’ण्ड भएपछि, ‘विवाह मण्डपमै मच्चियो खैलाबैला’ अचानक पुग्यो प्रहरी ! – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/बेहुलाका कारण विवाह मण्डपमै यस्तो का’ण्ड भएपछि, ‘विवाह मण्डपमै मच्चियो खैलाबैला’ अचानक पुग्यो प्रहरी !
बेहुलाका कारण विवाह मण्डपमै यस्तो का’ण्ड भएपछि, ‘विवाह मण्डपमै मच्चियो खैलाबैला’ अचानक पुग्यो प्रहरी !
काठमाडौं । विवाह मण्डपमा रहेकी बेहुलीलाई सिन्दुर हाल्न खोज्दा बेहुलाको हात नउठेपछि बेहुलाले बेहुलीको परिवारलाई रु चारलाख जरिवाना तिरेका छन् । यो झापाको घ’टना हो । मङ्सिर २९ गतेको दिउँसोको लगनमा झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिका–२ का न्यौपाने थरकी एक युवतीसँग भद्रपुर नगरपालिका–७ का सुवेदी थरका एक युवकको वैवाहिक कार्यक्रम हुँदै थियो ।
जसका लागि बुद्धशान्ति गाउँपालिकाकी उपप्रमुख मीर भुर्तेलसहितको टोलीले वि’वाद समाधानका लागि पहल गरेको प्रहरीले जनाएको छ । बेहुलाले आफू डाक्टर भएको भन्दै बेलुही पक्षलाई विवाहका लागि प्रस्ताव राखेको र उनी डाक्टर नभइ निजी अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारी रहेको बेहुली पक्षको आ’रोप छ ।
बेहुली पक्षले विवाहका लागि गरिएको खर्चको माग दा’बी गर्दै बेहुला पक्षसँग रु चार लाख रकम लिएको बुद्धशान्ति गाउँपालिका उपाध्यक्ष भुर्तेलले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “समाज बसेर विवाहको लागि भएको खर्चको हिसाब गरेको हो, यसमा गाउँपालिकाको कुनै हात छैन । विवाहको कुरा छिनेपछि बेहुला र बेहुली दुवैपक्षले सहमतिमै टीकाटाला नगरी एकै पटक विवाहका लागि राजी भएको बताइएको छ ।
यस अघि पनि बुद्धशान्ति गाउँपालिकामा एक व्यक्तिको विवाह हुँदा यस्तै घ’टना घटेको थियो । विवाहलगत्तै बेहुलीलाई छाडेर बेहुला भाग्दा बेहुलीको परिवारलाई रु ३५ लाख क्षतिपूर्ति समाजले दिलाएको थियो । जसका लागि गाउँपालिकामा सहमतिका लागि छलफल भएको थियो । रासस
भूकम्पले फेरी हल्लायो नेपाल स्थानीय त्रशित
नयाँ सङ्क्रमण सङ्ख्या घटेपनि केरोनाले एकैदिन अहिलेसम्मकै धेरैको ज्यान गयो